19 / 06 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Juun 19, 2018
Qorshaha cusub ee tareenka Silkworm
daydo Silkworm la soo saaraha ugu horeysay Turkey ee taraamka DurmazlarDhinac, inta ay sugayaan warka wanaagsan ee Poland waxay bilaabeen diyaarinta bartilmaameedka cusub, Badda Mediterranean-ka. Sababtoo ah X 20 tram ee mashruuca taraamka ee degmada Antalya Metropolitan Municipal [More ...]
Coast Coast Road Passing Tunnels
Dawladdu waxay ku dhowdahay gabagabada mid ka mid ah mashaariicdeeda waa weyn, tunelada Xeebta Badda Mediterranean-ka. 2019 Mashruuca ayaa la dhammaystiri doonaa bisha Diseembar iyo 39,8 km dhererkiisa 34 tuneel ayaa la dhisayaa. 17 waxay ku fidaysaa baaxadda mashruucu [More ...]
War Head helay Ship sida dhaqsaha badan Turkey ee Review hadon
Duqa magaalada Xamaas Assoc. Dr. Lutfi War, dhawaan ka hor keenay Mersin, Hatay, oo diyaar u yihiin inay duulimaadyo Beirut Cyprus, markabka dhaqsiyaha Turkey ee baaritaanka hadon helay. Madaxweynihii ugu horreeyay ee Savaş Hatay [More ...]
Bisha Cas ee lagu maal-galiyo Warshadda Dayactirka Wagon 150 Million TL
Madaxweynaha Bisha Cas ee Turkiga Kerem Kınık, oo ay kujirto sicirka dhulka iyo dhismaha warshadda Wagon Repair Factory (VOF), oo loogu talagalay in lagu iibiyo by Maamulka Maamulka Gaarka ah una gudbisay 83 milyan TL xarun ahaan. [More ...]
Madaarka Cusub ee Cusub ee Istanbul ayaa samayn doona Booqashada Ugu Horaysa
21 waxay noqon doontaa diyaaraddii ugu horreysay ee soo degta garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul bisha Juun. In berrinkii duulista Turkey ka mid ah madaarada dunida ee keentay gelin doonaa, cilmiga, waayo, garoonka cusub ee Istanbul ee October 29 [More ...]
Asphalt Study ee Serik iyo Korkuteli
Antalya Dawlada Hoose ee Magaalada, shaqada asphalt ee deriska iyo wadooyinka plateau oo hal dhinac ah iyadoo la dhameystirayo howlaha kaabayaasha wadada ee plateau ayaa diyaarinaya asfil. Kaabayaasha hoos yimaada Waaxda Adeegyada Miyiga, Dowladda Hoose [More ...]
163 Kilometer Asphalt for Gordes
Magaalada Manisa ee Magaalo-xeebeedka ah waxay ka bilaabatay dhaqaajinta asphalt ee gobolka iyadoo ay weheliso Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa, 4 kun oo kiiloomitir oo ka mid ah wadada 3 sanadlaha ah ee hartay ee waqtiga hartay la kulmay. Riyoodaan asphalt sanado badan [More ...]
240 Km Land Road oo laga furay Gaziantep
Dowlada Hoose ee Gaziantep ayaa furtay wado cusub oo ah kiiloomitir xNUMX kiloomitir degmada 91 ee 18 tuulada Şahinbey. Waxay dardar gelisay maalgashiyadeeda miyiga iyada oo loo marayo wadooyinka dhulka ah ee ay furtay, waxayna ku guuleysatay ogolaanshaha shacabka gobolka. Inbadan oo ku saleysan sababaha [More ...]
Dib u soo Celinta Qalabka Qalitaanka Cudurada Qalabka Cilmi-baarista si loo dhammeeyo
Xafiiska Samsun Guddoomiyaha iyo oo taageero ka Samsun degmada Metropolitan, a ugu horeysay ee Turkey "museum qalabku Qalliinka Medical" noqon dhamaadka shaqada dib u soo celinta on dhismaha doono yaklaşıld Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) in goobta jir Kılıçdede [More ...]
Markabkii hore oo ay Taliska Ciiddanka Badda ee Turkiga u qoondeeyeen Samsun ayaa loo wareejin doonaa markab madxaf ah oo ay leedahay Dawladda Hoose ee Magaaladda metrooga. Markabka, oo ay dayactireen Taliska Gobolka ee Ilaalada Xeebaha, ayaa loo qaaday Mert Beach. Degmooyinka Waaweyn [More ...]
Tababaraha England 3 Graffiti Artist Geni Ezdi
Saldhigga Loughborough Junction oo ku yaal koonfurta caasimadda Ingiriiska ee London, 3 qof ayaa lagu dilay shil tareen oo ku dhacay. Matthew Allingham, Booliiska Gaadiidka ee Ingiriiska, waa culeys cunug da 'yar oo ku jira da'da labaatameeyadiisa, koonfurta caasimada, London. [More ...]
RayHaber 19.06.2018 Warbixinta Shirka
B-70 Hurdada la taaban karo waxaa la heli doonaa Sahay Shidaal oo ay la socoto Nidaamka ATOS Shidaalka Shidaalka oo ay la socoto Nidaamka Awoodda Isticmaalka Shidaalka (ATOS)
Strukton Tareen si loo soo bandhigo InnoTrans 2018
InnoTrans 2018, Strukton Rail wuxuu soo bandhigi doonaa tikniyoolajiyadda si toos ah u ogaaneysa cilladaha ka imaan kara kaabayaasha iyada oo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda fiidiyowga ee otomaatiga ah loona gudbiyo qaybaha dayactirka. Strukton Rail InnoTrans oo lagu soo bandhigi doono InnoTrans [More ...]
TCDD Ruush Disturb Eskişehir
Guryihii hore ee TCDD iyo dhismayaasha aqoon-isweydaarsiga ee ku yaal bartamaha magaalada Eskişehir ayaa burburay. Sawirka dhismahan, oo noqday xariirka 'Tinerciler iyo agoonta, kuma habboonayn Eskişehir. Tareenka carqaladeeya [More ...]